Zvikamu muKudzidzisa uye Zvidzidzo
En Maumbirwo uye zvidzidzo Isu tinobata nenhamba huru yemisoro ine chekuita nedzidzo uye nechinangwa chekukubatsira iwe munzira yako yekudzidzira kuti uwane nzira yekubuda nayo munyika yebasa. Pazasi iwe unowana zvese zvinyorwa zvatakagadzira panguva ino yese yatave neino webhusaiti. Tine chikamu chevanopikisa, mauri muchawana ruzivo rwakanyanya uye rwakagadziridzwa pane huwandu hukuru hwemapazi akasiyana.
Isu zvakare tine chikamu chemashoko, nemakwikwi emazuva ano uye zviitiko zvingangonakidze iwe, pamwe nenhau dzichangoburwa pamusoro pekudzidziswa, yakanyorwa neyedu inoshamisa yekunyora timu. Kana iwe uchitsvaga chimwe chakakosha uye ukasachiwana pano, unogona kushandisa yekutsvaga injini.
Makomborero uye kuzivikanwa
Vanodzima Moto Vanopokana
State kuchengetedza mauto anopikisa
Mapurisa eKanzuru Anopikisa
Civil Guard Kupikiswa
Mapurisa Omunharaunda Anopikisa
Maforamu evadzidzi nenharaunda
Zviwanikwa uye kudzidziswa